Muddee 11, 2020
Baqattota Tigraay mooraa Um Rakuubaa jiran keessaa
Hojjattonni yoo xiqqaate 4 walitti bu'iinsa Tigraay keessaatti gaggeeffameen ajjeefamuu gareen gargaarsaa kan addunyaa Jimaata har'a beeksisee jira.Rakkoo gargaarsa dhala namaa hammaataa jiru kan ilaaleen Itiyoophiyaa fi kan waan godhu dhabee Tokkummaan Mootummootaa ilaalcha adda addaa calaqqisaa jiru.Kunis uummata Miliyoona hedduuf kan akka nyaataa fi kanneen biroon dhumaa dhumaa yeroo jiruutti jedhamee jira.
Kawunsiliin baqattootaa kan Deenmaark akka jedhutti hojjattonni isaa sadii baatii darbee ajjeefaman lafa projeektii qaban Tigraay keessaaf waadiyyaa ta'uun hojjatu turan.
waan nama gaddisiisuu immo qunnamtiin martiiwaan citeef jecha akkasumas dhabamuu nageenyaan naannoo sana jiruun kan ka'e maatiwwan kanneen ajjeefaman kanaa dhaqqabuu hin dandeenye jedhee jira.
Koreen Intarnaashinaal Reskiiw Komiitee jedhamu immo akka jedhutti mooraa baqataa Hitsaat k kan Shiree keessatti ajjeefamuu waahilleen hojii sadeen kanaaf maaltu itti ka'uumsa akka ta'e
baruuf hojjataa jira.
Hojjattoota keenya dhibba hedduu lafa sana irraa waan qabnuuf gareeleen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban martii sivilootaa Tigraay keessaaf eegumsa akka godhandubbii himaan dhimma gargaarsa dhala namaa kan Tokkummaa Mootummootaa Saviano Abreu erga namoonni sadeennajjeefamanii bood Twitarii irratti barreessan.
Mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti gargaarsa ofii isaa raabsuu kan danda'uu ibsuun giddu seensa hin barbaannuu jjedheera.Mootummaan Itiyoophiyaa Injifannoon xumuramuu labsuu iyyu wal waraansii itti fufee akka jiru kan gabaafamaa jira jedha koreen kun.
Jimaata har'a bakka to'annaa isaa jala jiru kan akka Shiree, Maqalee keessatti gargaarsa raabsuu isaa mootummaan beeksisee jira jedheera
Duulli Kun Lammiilee Biyyattii KanTokko Taasisee Ture: Angawaa Waraanaa
Filannoon Somaaliyaa Kan Kallattiin Hin Ta’in Danqaa Siyaasaatiin Boodatti Harkifate
Talaalii Farra Dhukkuba Koviid-19 Fudhachuu Malee Filmaannii Biraa Hin Jiru: Ogeeyyii Fayyaa
Dagannaan Weerara Vaayrasii Koronaa Hammeessaa Jira: Ministeera Fayyaa Itiyoophiyaa